Vision ၏မော်ကွန်းတိုက် - Brick Fanatics
01 / 09 / 2021 01 / 09 / 2021 ခရစ် Wharfe 336 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, MCU, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
24 / 08 / 2021 24 / 08 / 2021 ရော့ Paton 398 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, LEGO စုဆောင်း Minifigures 71031 Marvel စတူဒီယို, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Loki, Marvel, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
20 / 08 / 2021 20 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 262 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Avengers: Ultron ၏ခေတ်, Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ, Avengers: Infinity စစ်ပွဲ, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Minifigures, Mark Tranter ပါ, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, သေးသေးလေး, အဆိုပါ LEGO Group, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, WandaVision
18 / 08 / 2021 01 / 09 / 2021 ဂျက်ယက်စ် 588 Views စာ0မှတ်ချက် 60302 တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ကယ်ဆယ်ရေးစစ်ဆင်ရေး, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, 76021 Milano အာကာသယာဉ်အားကယ်ဆယ်ရေး, 76107 Thanos Ultimate စစ်တိုက်, 76201 ဗိုလ်ကြီးကို Carter & အဆိုပါ Hydra Stomper, 76237 Sanctuary II ကို, မိကျောင်း Loki, Black က Panther, Bucky ကျီများ, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, City, Clone Trooper ဖြစ်သည်, ကော်ဖီခွက်, စုဆောင်း Minifigures, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, အီစတာကွကျဥ, ဖါး, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, ရဟတ်ယာဉ်, Lady Loki, Lego, Lego CIty, LEGO CMFs များ, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Lego Marvel စတူဒီယို, Lego Marvel စူပါသူရဲကောင်းများ, Lego Minecraft, Lego Minifigures, lego ပြန်လည်သုံးသပ်, Lego သုံးသပ်ချက်များ, Lego Spider-Man, Lego Star Wars, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, Minecraft, အသေးစား, သေးသေးလေး, မော်နီကာရက်ဘို, ဆန်းစစ်ခြင်း, reviews, ဆမ် Wilson, Spider-Man, Star Wars, စတား-သခင်ဘုရား, streaming များ, superhero, Superheros တွေက, ဓားကို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, အဆိုပါ Marvels, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, Throg, အချိန်ကှဲလှဲအာဏာပိုင်, T'Challa စတား - Lord, ဗျာဒိတ်ရူပါရုံ, Wanda, ဝမ် Maximoff, WandaVision, အဖြူရောင်အမြင်, ဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey, ဖုတ်ကောင်
LEGO သည် ၇၁၀၃၁ ၌ပျော်ရွှင်သောအပြုံးမျက်နှာများအားလုံးကိုရှင်းပြသည် Marvel စတူဒီယို
06 / 08 / 2021 06 / 08 / 2021 ခရစ် Wharfe 332 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, 76178 နေ့စဉ် Bugle, ဓါးရွက်, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, ဒီဇိုင်နာအင်တာဗျူး, ဝါသနာရှင်မီဒီယာနေ့များ 2021, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego ဒီဇိုင်နာ, Lego ဝါသနာရှင်မီဒီယာ, Lego မှ marvel, Marvel, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်
အဆိုပါ LEGO Groupဒီဇိုင်နာများသည် ၇၁၀၃၁ တွင်အဘယ့်ကြောင့်ဇာတ်ကောင်များစွာကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားသည် Marvel Studios Collectible Minifigures ဆီမှာ 'ပျော်တယ်၊
28 / 07 / 2021 28 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 546 Views စာ0မှတ်ချက် 71026, DC စူပါသူရဲကောင်းများ, 71026 DC စူပါသူရဲကောင်းများစုဆောင်းထားသောအသေးစား, 71031 Marvel စတူဒီယို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Dc, Disney+, Thanos ၏ Blade ကိုအတူ Gamora, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego DC က, Lego မှ marvel, Lego စတိုးဆိုင်များ, LEGO.com, Loki, Marvel, Marvel ရုပ်ရှင်ရုံiverseာ, မော်နီကာရက်ဘို, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, အဆိုပါဆောင်းရာသီ Soldier, T'Challa စတား - Lord, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, ဖုတ်ကောင်ဗိုလ်ကြီးအမေရိကတိုက်, ဖုတ်ကောင် Hunter Spidey
26 / 07 / 2021 26 / 07 / 2021 ခရစ် Wharfe 530 Views စာ0မှတ်ချက် 71031 Marvel စတူဒီယို, Brick Fanatics YouTube ကို, Captain America, ဗိုလ်ကြီးဂarter, စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Disney+, Lego, Lego စုဆောင်းထားသောအသေးစား, Lego မှ marvel, Loki, Marvel, Sylvie, အဆိုပါစွန်ငှက်နှင့်ဆောင်းရာသီ Soldier, Scarlet စုန်းမ, အဆိုပါမျှော်မှန်းချက်, WandaVision, တကယ်လို့ ... ဘာဖြစ်မလဲ...?, YouTube ကို